प्रचण्ड कांग्रेस बिगार्न लागिपरेका छन्: केपी ओली (भिडियो सहित) - Nepal’s First News Agency
प्रचण्ड कांग्रेस बिगार्न लागिपरेका छन्: केपी ओली (भिडियो सहित)
काठमाडौं, मंसिर ०८ गते । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग होशियार रहन नेपाली काँग्रेसलाई आग्रह गर्नु भएको छ । अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड काँग्रेसलाई बिगार्न पछि लागेको भन्दै होसिएर रहन आग्रह गर्नु भएको हो । अध्यक्ष ओलीले काँग्रेसको पुच्छर बनेको प्रचण्ड र माधव नेपालबाट देश बन्छ भन्ने कल्पना नगर्न समेत आग्रह गर्नु भयो । बुधबार काठमाडौंमा पार्टी निकट युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालले गठन गरेको र्साइबर सर्कल घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रचण्डले काँग्रेसलाई बिगार्न समातेको दावी समेत गर्नु भयो । उहाँले आफूहरुलाई बिगार्ने प्रयास असफल भएपछि प्रचण्ड काँग्रेसको पछि लागेको समेत भन्न भ्याउनु भयो । अध्यक्ष ओलीले भन्नु भयो, ‘काँग्रेसको पछि लाग्ने प्रचण्डको पछि लागेर देश बन्छ ? बहुमतको कम्युनिष्ट पार्टी फुटाएर चोईटो लिएर कुँदने त्यस्ताहरुको पछि लागेर देश बन्छ ? प्रचण्डले सधै समस्या खडा गर्ने । हामीलाई बिगार्न खोजेका थिए । नविग्रिने देखेपछि टाप । का विग्रन्छ एमाले ? अव काँग्रेसलाई समातेछ । म काँग्रेसलाई चेतावनी दिन चाहन्छु–काँग्रेस होसियार । प्रचण्डले भ्याई दिन्छन । हामीलाई भ्याउन खोजेका थिए प्रचण्डले, सकेनन् ।’
कपिलवस्तु मंसिर १३ गते । विद्यालयले शिक्षक भर्ना गर्न नसक्दा कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाको प्राविधिक अध्ययन गर्ने विद्यार्थी पढाईबाट बञ्चित भएका छन् । नगरपालिकाको जानकी माध्यामिक विद्यालयका सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन...